Talenta misandratra : mivoy ny gadon’ny ranomasimbe Indianina i Avotra | NewsMada
Talenta misandratra : mivoy ny gadon’ny ranomasimbe Indianina i Avotra
« Mampiasa fitaovana nentim-paharazana avy eto an-toerana toy ny korintsana, valiha , marovany, sy ny avy any amin’ireo Nosy manodidina, toy ny kayamb sy maracass-maloya avy atsy La Réunion, ary ny ravanne sy ny Kabar avy any amin’ny Nosy Maurice aho. Ampivadiana amin’ny fitendry gasy izany rehetra izany », hoy ny mpanakanto Avotra, tamin’ny resaka nifanaovana taminy, omaly.
Nambarany fa anisan’ny nanome tosika azy ho amin’ny fivelarana teo amin’ny sehatry ny mozika ny fanarahany ireo mpanakanto zoky maromaro mivoy ny gadon-kirany avy. Tsy izany ihany anefa fa eo koa ny maha mpikambana azy eo anivon’ny antoko mpihira any am-piangonana …
Fiaraha-miasa amin’ny mpanakanto hafa
Momba ny fandaharam-potoana indray, nambarany fa misy ny fiarahana amin’ireo mpanao pôezia etsy amin’ny Cemdelac sy ny CGM. « Tsy ho ela koa ny hetsika lehibe iarahana amin’ireo mpanakanto mivoy ny mozika malagasy misy fotony. Manampy ireo ny fivoahana atsy amin’ny Nosy La Réunion sy Maurice ary Métropole any amin’ny faran’ny taona 2016 any », hoy ihany i Avotra. Notsiahiviny fa hetsika iarahana amin’ny trano mpamokatra miara-miasa aminy DLS Prod atsy La Réunion sy ny Association Clef any amin’io Nosy io izany.
Araka ireo, handeha lavidavitra kokoa amin’ity gadona, nofidiny ity i Avotra sy ireo mpiray tarika aminy, manomboka izao.